🥇 ▷ Free Chatous, app si aad ula sheekaysato dadka aan tooska ahayn ee ku jira barnaamijkaaga Android ✅
La kulanka dadka xiisaha leh ee khadka tooska ah had iyo jeer ma fududaan. Laakiin codsiyada sida Wada sheekeysan Waxay noo fududeeyaan wax yar oo fudud in aan saaxiibo cusub samayno.
Waa barnaamij Android ah halkaas oo aad kula sheekaysan karto dadka aan tooska ahayn, oo kuu oggolaanaya inaad la kulanto dadka. Laakiin waxaad dooran kartaa mowduucyo kala duwan oo aad ka hadasho, si aad u hesho dad leh dhadhan wadaag.
Markaa, samaysashada saaxiibo cusub iyo ballaarinta wareeggaaga wax yar ayaa ka fududaan doonta sidii hore.
Dood-wadaag, barnaamijku inuu kula kulmo dadka isla dhadhankaaga ah
Raadi dad leh danaha guud
Markaad gasho Chatous, waxaad ka heli kartaa haashta badan. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu tixraacayaa mowduuc aad xiiseyneyso.
Kaliya waa inaad gujisaa midka aad rabto inaad ka hadasho. Markaa sheekaysigu si aan kala sooc lahayn ayuu kugula soo biiri doonaa qof isla isla taabtay. Marka, uma ciyaari doontid inaad la hadashid qof aadan aqoonin wax aadan isla wadaagin, maxaa yeelay ugu yaraan waxaad yeelan doontaa hal mowduuc oo isku mid ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii wada hadalka uusan u socon sidii aad rabto, magacaaga isticmaaleha waa la beddeli karaa iyagu ma ay awoodi doonaan inay ku raadiyaan. Wadahadalka wuxuu dhamaan doonaa marka labada dhinac midkood doonayo.
Qalabka Multiplatform Android
Barnaamijka Chatous ayaa ah mid si dhammaystiran ula shaqeeya adiga Qalabka shabakadda. Sidan, haddii aad rabto, waxaad sidoo kale ka heli kartaa kombiyuutarka, kaniini ama taleefan kale. Muhiim maahan inaad adigu had iyo jeer isku xirnaato isla aaladda aad rabto inaad gasho.
Sida shabakadaha bulshada badankood iyo wixii la mid ah, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa abuurida a astaan ​​guud. Faahfaahintan waxaa ku jiri doona dhammaan mowduucyada adiga xiiseeya, si uu appku u raadin karo dadka adiga oo kale ah. Laakiin sidoo kale waa habka uu appku u leeyahay in aad ka heli karto aalad kale oo “kuu joogtid”. Kaliya waa inaad ku dartaa magacaaga isticmaale iyo lambarkaaga sirta ah waadna gali kartaa markasta oo aad rabto.
Markaad gasho, barnaamijku wuxuu kugu soo biiri doonaa isticmaale kale oo waad bilaabi kartaa wada sheekaysiga. Kaliya ma heli doontid fursad aad ku dirto farriimaha qoraalka ah, laakiin sidoo kale sawirro iyo fiidiyooyinno ka socda YouTube-ka. Fikradda ayaa ah inaad leedahay wada-hadal sida ugu xiisaha badan ee suuragalka ah, iyo inay noqon karto bilowga saaxiibtinimo qurux badan.
Soo dejiso Chatousgratis, barnaamijka Android
Wadahadalku waa bilaash. Waa barnaamij Android ah halkaas oo aad ka sameyn karto soo iibsashada gudaha-app si aad ugu darto astaamo dheeri ah. Kaliya waxaad u baahan tahay mobiil leh Android 4.1 ama ka sareeya.
Haddii aad rabto inaad ku biirto wax ka badan 10 milyan oo qof oo mar horeba u adeegsaday barnaamijkan adduunka, kaliya waa inaad kala soo baxdaa xiriirinta soo socota:
Haddii aad tahay isticmaale Chatous ah oo aad rabto inaad la wadaagto aragtidaada isticmaaleyaasha kale, waxaad ku sameyn kartaa qaybta faallooyinka ee hoose.